सफलताको कथा : विश्वकै धनी जेफ बेजोसः ग्यारेजदेखि ग्याजेटसम्म ! — Motivatenews.Com
सफलताको कथा : विश्वकै धनी जेफ बेजोसः ग्यारेजदेखि ग्याजेटसम्म !
Posted on August 18, 2018 by shovaraj baral
काठमाडौं – अमेजन डटकमका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोसको नाम नसुन्ने मानिस कमै होलान् । उनी अहिले विश्वकै सबैभन्दा धनी मानिस हुन् । बिल गेट्सलाई जेफले दोस्रो बरियतामा झारिदिएका छन् ।
विश्वभरका धनाढ्यको सूची सार्वजनिक गर्ने फोर्ब्स म्यागेजिनका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति ११२ बिलियन डलर अर्थात १२५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा
अमेजन डटकमका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोसको नाम नसुन्ने मानिस कमै होलान् । उनी अहिले विश्वकै सबैभन्दा धनी मानिस हुन् । बिल गेट्सलाई जेफले दोस्रो बरियतामा झारिदिएका छन् ।
विश्वभरका धनाढ्यको सूची सार्वजनिक गर्ने फोर्ब्स म्यागेजिनका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति ११२ बिलियन डलर अर्थात १२५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा धेरै छ ।
अनलाइनबाट सामान तथा सेवा बिक्री गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्टोर अमेजनडटकम मार्फत उनले साढे ५ लाख भन्दा धेरै मानिसहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
बेजोसको जन्म र शिक्षा
१९६४ जनवरी १२ मा अमेरिकाको न्युमेक्सिको राज्यको अल्बकर्की राज्यमा जन्मिएका जेफ्री प्रेस्टन जर्गिन्सनको रुपमा टेक्सासको होस्टनमा हुर्किए ।
उनी १७ महिनाको हुँदा उनकी आमा ज्याकलिन र बुबा टेड जर्गिन्सन् बीचमा डिभोर्स भयो, त्यतिखेर जेफकी आमा टेड १८ वर्षकी मात्रै थिइन् ।
जागिर छाडेर व्यावसायी बनेका बेजाेसलार्इ धेरैले टाट पल्टिन्छस् भने । तर, उनी मेहनत गर्दै अगाडि बढे । अहिले उनी अनलाइन बुक स्टोरका रुपमा मात्रै सीमित नभएर विभिन्न कम्पनीहरु आफू मातहतमा सञ्चालन गरिरहेका छन्
चार वर्षीय जेफ्रीलाई अपनाउन तयार भएपछि उनकी आमाले पछि मिगेल बेजोससँग विवाह गरिन् । त्यसपछि जेफ्री प्रेस्टन जर्गिन्सनबाट उनी जेफ्री प्रेस्टन बेजोस बने ।
बेजोसले अमेरिकाको न्यू जर्सीस्थित प्रिन्सटन विश्वविद्यालयबाट सन् १९८६ मा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर साइन्समा स्नातकको पढाइ पूरा गरे ।
पढाइ सकिएपछि उनले सन् १९८६ देखि १९९४ सम्म आठ वर्ष वालस्ट्रिटमा विविध क्षेत्रमा काम गरे । आठवर्षसम्म जागिर खाँदा उनमा आफ्नै व्यवसाय गर्ने सोच आयो ।
उनले के व्यवसाय गर्ने भनेर सोच्न थाले । सोच्दै जाँदा उनले अनलाईन बुकस्टोर खोल्ने निर्णय गरे ।
यसरी भयो अमेजन डटकमको सुरुवात
अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट सियटल यात्राका क्रममा व्यापार योजना बनाएपछि बेजोसले सन् १९९४ जुलाई ५ मा सियटल शहरस्थित एक ग्यारेजबाट अनलाइन बुक स्टोरको रुपमा अमेजनको सुरुवात गरे । स्टोरको नाम उनले दक्षिण अमेरिकामा बग्ने अमेजन नदीको नामबाट राखे । किनभने अमेजन अंग्रेजी वर्णमालाको पहिलो अक्षर ‘ए’ बाट सुरु हुन्छ ।
उनले आफ्ना आमाबुबासँग करिब ३ लाख डलर सापटी लिए र व्यवसाय सुरु गरेका थिए । त्यसताका इन्टरनेट सबैको पहुँचमा थिएन र यो धेरैका लागि नौलो कुरा नै थियो । उनले ठूलो जोखिम मोलेका थिए, धेरै मानिसहरु इन्टरनेटबाट पुस्तक किन्न तयार थिएनन् ।
त्यतिखेरको समयमा अनलाइन मार्केटिङ धेरै नयाँ कुरा थियो, उपभोक्ताहरुलाई यसबारेमा थाहा नै थिएन । सुरुमा बेजोसले धेरै मेहनत र संर्घष गरेर यसलाई अगाडि बढाउँदै लगे ।
धेरैले त बेजोस टाट पल्टिन्छन् समेत भने । तर, उनी निरन्तर मेहनत गर्दै अगाडि बढे । उनले विस्तारै व्यापार बढाउँदै लगे । अमेजन डटकमले धेरै पुस्तकहरु बेच्न थाल्यो ।
विस्तारै उनले सेवा विस्तार गरेर आफ्नो स्टोरबाट पुस्तकमात्रै नभई भिडियो र म्युजिक डाउनलोड/स्ट्रिमिङ, भिडियो गेमहरु, सफ्वेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, कपडाहरु, फर्निचर, खानेकुरा, खेलौना र गरगहना समेत उपलब्ध गराउन थाले ।
अहिले अमेजन अनलाईन बुक स्टोरका रुपमा मात्रै सीमित छैन । यसले विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्छ । हाल अमेजनले विभिन्न कम्पनीहरुलाई किनेर आफ्नो मातहतमा सञ्चालन गरिहेको छ ।
यो अहिलेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेल्स कम्पनी हो । साथै अमेजन क्लाउड इन्फ्रास्ट्रचकर सर्भिस प्रदान गर्ने पनि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक हो ।
फोर्ब्सको धनाढ्य सूचीमा बेजोस
सन् १९९७ मा अमेजन पहिलोपल्ट पब्लिक कम्पनीको रुपमा गयो र सन् १९९९ मा बेजोस पहिलोपटक फोर्ब्सको धनाढ्यको सूचीमा अट्न सके । त्यतिखेर उनको कुल सम्पत्ति १० अर्ब अमेरिकी डलर थियो ।
तर लगत्तै अर्को वर्ष उनको सम्पत्ति ४ अर्ब डलरले घट्यो र ६ अर्ब भयो । त्यसपछिका वर्षहरुमा घट्दै गएर सन् २००२ मा१.५ अर्ब डलरमात्रै बाँकी भयो ।
त्यसपछि फेरि विस्तारै बढ्दै गयो र सन् २०१७ जुलाई २७ मा उनी विश्वकै सबैभन्दा धनी मानिस बने, त्यतिखेर उनको अनुमानित सम्पत्ति ९० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै थियो ।
त्यसयता कम्पनीको सेयर मुल्य निरन्तर बढ्न थाल्यो र सन् २०१७ नोभेम्बर २४ मा उनको सम्पत्तिले १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आँकडा पार गर्‍याे । उनी १०० अर्ब अमेरिकी डलर कमाउने विश्वकै पहिलो व्यक्ति बने ।
उनलाई सन् २०१८ मार्च ६ मा फोब्र्स म्यागेजिनले विश्वकै सबैभन्दा धनी मानिसको रुपमा घोषणा गर्‍याे । फोब्र्स म्यागेजिनका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति ११२ अर्ब डलर रहेको छ र सेयरमुल्य बढेसँगै उनको सम्पत्ति अझै बढ्दै गइरहेको छ ।
महत्वाकांक्षी परियोजनाबाट डराउँदैनन् बेजोस
बेजोसले सन् २००० मा उनले एरोस्पेस कम्पनी ‘ब्लु ओरिजिन’को स्थापना गरे । धेरै वर्षको मेहनतपछि ‘ब्लु ओरिजिन’को परिक्षण उडान सन् २०१५ मा सफल रुपमा अन्तरिक्षमा पुग्यो ।
यसले सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा मानव यात्री लिएर व्यवसायिक अन्तरीक्ष उडान गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै उनले सन् २०१३ मा २५० मिलियन अमेरिकी डलरमा ‘वासिङ्टन पोस्ट’ अखबार खरिद गरे । बेजोसले आफ्नो भेन्चर क्यापिटल फण्ड ‘बेजोस एक्सपिडिसन’मार्फत अन्य व्यापारमा लगानी गर्छन् ।
बेजोस मनकारी पनि छन्, उनले धेरै ठूलो धनराशी समाजसेवाका लागि दान दिने गरेका छन् । उनले करोडौं डलर विभिन्न च्यारिटी संस्थाहरुको लागि दिइसकेका छन् ।
Posted in लेख रचना, सफलता | Leaveareply